Baarlamaanka oo ansixiyay hindise sharciyeedka xuduudaha & .. - iftineducation.com
iftineducation.com – Xildhibaanada Baarlamaanka oo maanta Muqdisho ku yeeshay fadhigii 21aad ee kalfadhiga shanaad ee Baarlamaanka ayaa waxay ku ansixiyeen hindise sharciyeedka Gudiga Xuduudaha iyo Federaalka, kaasoo labadii maalmood ay ka doodayeen.
Kulanka Baarlamaanka oo ahaa mid labo ajande looga dooday oo kala ahaa ansixinta hindise sharciyeedka iyo warbixin ku saabsan dilalka Xildhibaanada oo uu baarlamaanka ka hor jeediyay Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Jen, C/raxmaan Tuur Yare.
Hindise sharciyeedkan oo ay soo diyaarisay Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa qeyb ka ah hirgelinta federaalka iyo xuduudaha ay yeelanayaan maamul goboleedyada, waxaana kulankii maanta lagu ansixiyay sharcigaas soo xaadiray 145 mudane.
SOMALIA-POLITICS-UNRESTGudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo shir gudoominayay kulanka ayaa sheegay in cod la geliyo hindise sharciyeedkan, kadib markii ay Xildhibaanada ka soo doodeen.
Intaas kadib ayaa waxaa hindise sharciyeedkan ogolaatay 129 mudane, halka 13 mudane ay diideen, waxaana ka aamusay hal mudane, iyadoo Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka uu sheegay in sidaasi uu ansax ku noqday Hindise sharciyeedka Gudiga Xuduudaha iyo Federaalka.
Sii hayaha xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/llaahi Goodax Barre ayaa uga mahad celiyay xildhibaanada meel marinta hindise sharciyeedkan, waxaana uu sidoo kale ammaan u jeediyay shaqaalihii soo diyaariyay sharcigan.
Ansixinta kadib ayaa waxaa warbixin looga dhageystay kulanka Taliyaha Hey’adda geysto Muqdisho, isagoo sheegay inay bur buriyeen labo shabakadood oo ku lug lahaa dilalka Xildhibaanada.
“Labada shabakadood ee la bur buriyay waxaa ka howl-geli jirtay 11 qof, oo sideed ka mid ah gacanta lagu hayo, halka saddexda kale ay baxsadeen oo ay ka carareen magaalada Muqdisho” ayuu yiri Taliye Tuur Yare oo intaa ku daray in Hey’adaha Ammaanka ay wadaan howl galo habeen iyo maalin ah oo lagu sugayo ammaanka dalka.
Ugu dambeyn Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka ayaa soo xiray shirkii Baarlamaanka ee maanta.
Daawo fanaanad caan ah oo ka cabatay dhibaato ku haysata magaalada hargaysa muuqaal naxdin leh